Qaar ka mid ah tilmaamaha lagu doorto cadarka kugu habboon adiga | Ragga Stylish
Sifooyinka kala duwan ee cadarku waxay naga dhigi karaan inaanan had iyo jeer garanayn sida loo saxo. Waa kuwee cadar la socota shakhsiyadeena?
Udugga oo dhami isku mid ma aha, sidoo kalena ma aha waxay ku habboon yihiin dhammaan daqiiqadaha.
Nimcada cadarku waxay ku jirtaa iyaga karti u lahaanshaha shakhsi ahaaneed iyo la shaqeynta qof kasta oo u gashada.
El barafuunka wanaagsan wuu kala duwan yahay waxayna kuxirantahay nooca maqaarka qofka qaba uu leeyahay. Waxyaabaha ay ka midka yihiin pH oo leh aashitad sare ama ka hooseysa, ama xitaa bey'adda, way saameyn kartaa.
1 Noocyada udugga ee lagu doorto cadarka saxda ah
2 Xagee lagu sameeyaa baaritaanka cadarka?
3 Tirada cadarka la isku dayo
Noocyada udugga ee lagu doorto cadarka saxda ah
Dhirta. Kuwa jecel cadarka udgoon ee dhirta, caleemaha, dhirta, iwm. Taabashada kaynta.
Liinta Boormahan waxay ka kooban yihiin boqolkiiba ka badan qaybood sida mandarin, bambeelmo, oranji, IWM
ka cadarka bariga Waxay ka samaysan yihiin dhir udgoon sida qorfe, vanilj iyo basbaas. Isticmaalkeedu waa ku habboon yahay habeenkii.
Guud ahaan, geedaha miraha waxay leeyihiin cod macaan, laakiin isfahansiin waqti isku mid ah. Inta badan la isticmaalo waa fersken, abrikot, berry iyo xitaa qaraha.
Wicitaanada qoryo leh, waxay leeyihiin faahfaahin alwaax ah, ajada, fooxa, ambaaska ama xabagta.
Xagee lagu sameeyaa baaritaanka cadarka?
Isku dayga cadarka aan heli doonno, waxa ugu fiican ayaa ah had iyo jeer ku tijaabi maqaarkaaga. Waxay kuxirantahay heerka qaangaarnimadeeda, carafta udambeysa way kala duwanaan kartaa.
Xaqiiqda ah in cadarka aan isku dayno uu udgoon ugu yeesho hal qof maqaarkiisa macnaheedu maaha inay ku yeelanayso isla natiijada mid kale.
Tirada cadarka la isku dayo
Markaan tijaabineyno cadarka aan heli doonno, waxaa jira xad. Afar ama shan cadar ayaa ku habboon. Marka laga gudbo tiradaas, waanu buuxin karnaa. Sidoo kale waa muhiim in lagu dabaqo meelaha aan isku dhowayn, ama isku udgoonsada.
Haddii aan rabno inaan jimicsi ku sameyno awoodeenna urta, waxaa jira ciyaaro ama xirmo udgoon badan, si aad tababar ugu aaddid.
Ilaha sawirka: Inbadan oo Fashion / Fape Point ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Sida loo doorto cadarka ugu fiican
Waa maxay nooca caraf udgoon ee ay tahay in qofka qaba maqaarka madow iyo kan sare ee pH uu isticmaalo?
Ku jawaab Flor perez